ကြှနျတျော တကယျခဈြခဲ့မိသော အခါ - Owl Myanmar News
နမြေိုးတို့အိမျသှားတော့ တီဌေးက ရှောငျနတေုနျးပါပဲ။ ၃၄ နှဈထိ စောငျ့စညျးလာတဲ့ အပြိုကွီး ခုတော့ ရှကျနရှောမှာ။ နမြေိုးက တီဌေးကို ကွညျ့ပွီး မကျြစိမှိတျပွတယျ။ သိပျမကွာဘူး သားအမိနှဈယောကျ ဈေးဝယျထှကျသှားတယျ။ တီဌေးကို ဖနျလို့ရအောငျ နမြေိုးက ရှောငျပေးတာပဲ။ တီဌေးနဲ့ ကြှနျတျောပဲ အိမျမှာ ကနျြခဲ့တယျ။ “တီဌေး ဟိုညက ပြျောရဲ့လား” မဖွပေါဘူး။ မကျြနှာကွီးနီပွီး တီဗီထဲ စိတျဝငျစားသလို လုပျနတေယျ။ “တီဌေး မဖွရေငျ video တှေ အငျတာနကျပျေါတငျမှာနျော” “ဆေးခပျပွီး မဟုတျတာ ဝိုငျးလုပျတာ ဘာလို့ပြျောရမှာလဲ” တီဌေးက မကျြစောငျးထိုးရငျး ဖွတေယျ။ “ဒါဆို နမြေိုး လုပျပေးတုနျးက ပြျောတယျပေါ့” တီဌေး ပွနျမဖွဘေဲ ခေါငျးငုံ့နတေယျ။ တူအရငျးလိုးတာခံရတော့ ရှကျနတေယျထငျတာပဲ။ တီဌေးဘေးကို သှားထိုငျလိုကျတယျ။ တီဌေးက အိမျနရေငျးမို့ တီရှပျအဟောငျးနဲ့ စပနျ့သားဘောငျးဘီရှညျဝတျထားတယျ။ ပေါငျတှကေို ဘောငျးဘီပျေါကနေ ရှရှလေးပှတျပေးတယျ။ တီဌေးလကျကလာဖယျတယျ။ ပါးလေးကို နမျးပွီး “ပြျောကွရအောငျ တီဌေးရာ” ငွိမျနတောနဲ့ နှုတျခမျးကိုနမျးပွီး လြှာထိုးထညျ့တယျ။
အသကျမပါသလို တီဌေးကနနေတေယျ။ နမျးနရေငျး တီရှပျထဲ လကျလြှိုပွီး ဘရာခြိတျကို ဖွုတျတယျ။ နို့သီးခေါငျးတှကေို လကျနဲ့ခတြေယျ။ နညျးနညျးကွာအောငျ နှုးပွီး တီဌေးဘောငျးဘီကို နှိုကျလိုကျတော့ အရညျတှရှေဲနပွေီ။ “အခနျးထဲသှားရအောငျ” တီဌေးကို ဆှဲထူချေါရငျး ကြှနျတျောပွောလိုကျတယျ။ မလိုကျခငျြ လိုကျခငျြနဲ့ပါလာတယျ။ အခနျးတံခါးကို လော့သခြောခပြွီး ပိတျတယျ။ တီဌေးက ကုတငျပျေါမှာ မကျြနှာပျေါ ခေါငျးအုံးကွီးနဲ့ ကာထားတယျ။ ခှငျ့ပွုတဲ့သဘောပဲ။ အဝတျတှေ အကုနျခြှတျပွီး ကုတငျပျေါတကျလိုကျတယျ။ တီဌေးရဲ့စပနျ့သား ဘောငျးဘီကို ခြှတျတယျ။ ခွထေောကျကိုကားပွီး ဝငျထိုငျလိုကျတယျ။ ပငျတီက အနီရငျ့ရငျ့နဲ့ အရညျတှရှေဲနပွေီ။ ပငျတီပျေါကနေ နမျးပေးတယျ။ အစရှေိ့မဲ့နရော မှနျးပွီး လြှာနဲ့ထိုးတယျ။ တီဌေးကတော့ ဘာမှမတုနျ့ပွနျသေးဘူး။ ပငျတီကို မခြှတျဘဲ ဘေးကိုဖယျပွီး ဘာဂြာစကိုငျတယျ။ အရညျတှကေ စိမျ့စိမျ့ပွီးထှကျလာတယျ။ ပငျတီကို ခြှတျတော့ တီဌေးက ဖငျကို ကွှပေးတယျ။ အရညျတှကေ ဖငျဝအထိ စီးကနြတေယျ။ ဘာဂြာဆှဲရငျး ဖငျဝကို လကျခလယျထညျ့မှတေယျ။ နမြေိုး ခပြွီးသားမို့ ခရဝေက လကျခလယျဝငျလာတာကို ဖှငျ့ပေးတယျ။
တီဌေးက မကျြနှာကို ခေါငျးအုံးနဲ့ ကှယျထားတယျ။ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို အပျေါတှနျးတငျလိုကျတယျ။ ဖငျဝပျေါလာအောငျလို့ပါ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တီဌေးကို ကွညျ့ရငျး ခရခွှေခေငျြတာ။ gel ဘူးအဆငျသငျ့မရှိဘူး။ တီဌေးရဲ့ ကုတငျဘေး မှနျတငျခုံမှာတော့ Ginvera သံလှငျဆီဘူးလေးတှတေ့ယျ။ ကှနျဒုံးစှပျတယျ။ သံလှငျဆီလေး သုံးပွီး ဒဈစထညျ့တယျ။ တီဌေးဖငျက နမြေိုးရဲ့ ဂျေါလီတောငျ ခံထားဖူးတော့ အခု သိပျမနာဘူးထငျတယျ။ တထဈခငျြးခြော့သှငျးပွီး ဆုံးသှားတော့ ခဏစိမျထားတယျ။ စောကျစလေ့ေးကို ကလိတယျ။ တီဌေးက ရှကျတာလား စိတျဆိုးတာလား မသိ လုံးဝမလှုပျမယှကျနဲ့။ နညျးနညျးလေး ထုတျလိုကျ ပွနျသှငျးလိုကျ စလုပျတယျ။ အစပိုငျးတော့ ခပျဖွေးဖွေးပဲ။ ခွထေောကျတှကေို လိုးနရေငျး ရငျဘတျထိကပျအောငျ တှနျးထားလိုကျတယျ။ အရှိနျတငျပွီး ဆောငျ့တယျ။ ရုတျတရကျ ရပျလိုကျတော့ တီဌေး အောကျကပငျ့လာတယျ။ မကျြနှာကှယျထားတဲ့ ခေါငျးအုံးကို အတငျးလုယူတယျ။ ခေါငျးအုံးပါသှားတော့ မကျြစိမှတျပွီး အံကွိတျထားတယျ။
ဖငျထဲလီးထညျ့ထားရငျး နှုတျခမျးတှကေို နမျးတယျ။ လညျပငျးနားကို မာကငျရာပျေါအောငျ ဆှဲစုပျလိုကျတယျ။ တီရှပျကို ဆှဲလှနျပွီး နို့စို့တယျ။ အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ အခကျြငါးဆယျလောကျဆောငျ့ပွီး လီးကို ဆှဲထုတျလိုကျတယျ။ ကှနျဒုံးကို ခြှတျတယျ။ ဂျေါလီပါတဲ့ ကှနျဒုံးပွောငျးစှပျတယျ။ တီဌေး စောကျစကေို့ တခကျြ နှဈခကျြပှတျဆှဲပွီး အဝမှာတေ့ တခကျြတညျး ဆောငျ့ထညျ့လိုကျတယျ။ “အား ကြှတျ ကြှတျ သပေါပွီ အရမျးလုပျရလား ပွညျ့စုံရယျ” “တီဌေး ကောငျးအောငျလို့ပါ နာရငျ ခဏသညျးခံနျော ကောငျးလာလိမျ့မယျ” တီဌေး စောကျဖုတျက တငျးကပျြနဆေဲဆိုတော့ သိပျကွာကွာဆှဲမလိုးနိုငျဘူး။ သုကျတှထှေကျခငျြလာတာနဲ့ စောကျဖုတျထဲထိုးထညျ့ပွီး စိမျထားလိုကျတယျ။ သုကျတှကေုနျမှ လီးမပြော့ခငျ ဆှဲထုတျပွီး ကှနျဒုံးကို ခြှတျတယျ။ ပွီးတော့ တီဌေးကို ဂြာပေးလိုကျတယျ။ တီဌေးလဲ ပွီးထားပုံတော့ရတယျ။ တီဌေးဘေးမှာ ဝငျအိပျပွီး ဖကျထားလိုကျတယျ။ “ခဈြလိုကျတာ တီဌေးရယျ” “ခဈြရငျ အဲလိုလုပျရတာလား။ နမြေိုးကိုလဲ လုပျနတော တှဖေူ့းတယျနျော။ နမြေိုးကိုလဲ ခဈြတယျပေါ့” မွတျစှာဘုရား တီခိုငျတငျမက တီဌေးပါ သိနတေယျ။ “တီဌေး ဘယျလိုသိတာလဲ” “ပကျပငျးကွီး မွငျတာလေ။ မခိုငျနဲ့ လပွေတေောငျပါသေး” တီခိုငျက ကနျြတဲ့သူတှပေါ သိတာ မပွောဘဲ ထားတာကို။ စကားပွောရငျး လကျက တီဌေးနို့တှကေို ဆုပျနယျပေးနတေယျ။ စကားလမျးကွောငျးပွောငျးခငျြတာနဲ့
“မရှကျနဲ့တော့နျော တီဌေး” လို့ပွောရငျး နောကျတခြီစဖို့ အစပြိုးတယျ။ လကျက စောကျဖုတျကို ရှရှလေးပှတျရငျး နို့စို့ပေးနတေယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ အိမျရှကေ့ ဘဲလျတီးသံကွားလိုကျရတယျ။ ကြှနျတျောလဲ အဝတျအစားအမွနျဝတျပွီး တံခါးသှားဖှငျ့ရတယျ။ တီခိုငျတို့သားအမိ ပွနျလာတာပါ။ တီဌေးက နသေိပျမကောငျးလို့ အိပျနတေယျလို့ ပွောလိုကျတယျ။ နမြေိုးက ငါသိပါတယျကှာဆိုတဲ့ အကွညျ့နဲ့ ကွညျ့တယျ။ တီခိုငျ နမြေိုးတို့နဲ့ ခဏစကားစမွညျပွောပွီးတော့ အိမျပွနျလာခဲ့တယျ။ ညကတြော့ တီခိုငျ ဖုနျးဆကျလာတယျ။ “ပွညျ့စုံ ဒီနေ့ ကငျြဌေးကို လိုးလိုကျလား” “ဟာ မလုပျရဲပါဘူး မမခိုငျ။ မမကိုတောငျ ခဈြလှနျးလို့ စှနျ့စားပွီး လုပျလိုကျရတာပါ” “ဒါဆို နငျတို့ ငါမရှိတုနျး ဘာလုပျနကွေလဲ” “ကြှနျတျောက တီဗှီကွညျ့တယျ။ တီဌေးက နမေကောငျးလို့ဆိုပွီး အခနျးထဲ ဝငျအိပျနတေယျ” “ဟုတျလို့လား ကငျြဌေးအခနျးထဲ ညနကေစကားသှားပွောတော့ နငျသုံးနကွေ ကှနျဒုံးတှတေ့ယျနျော။ အပြိုကွီးရဲ့ အခနျးထဲ အဲဒါ ရှိနစေရာလား။ ပွီးတော့ လိုးထားတဲ့ အနံ့လဲ ရသလိုပဲ” “မမခိုငျ အခနျးကနေ တီဌေးအခနျးကို ခြောငျးလို့ရအောငျ လုပျထား။ မနကျဖွနျ ဘယျသူလိုးနလေဲ ကြှနျတျောပွမယျ။ အိမျက ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ထှကျလာခဲ့။ သော့အပိုယူလာခဲ့” တီခိုငျလဈရငျ နမြေိုးက တီဌေးကို ဖွုတျမှာပဲ။ အဲဒါ တီခိုငျကို ပွရမယျ။ သူ့ညီမကို ကြှနျတျော အလှတျမပေးဘူးဆိုတာ သူသိရငျ စားပေါကျပိတျမှာစိုးလို့။ တီဌေးက အပြိုမို့ စောကျဖုတျက အလတျကွီး ရှိသေးပမေဲ့ အိမျထောငျသညျ တီခိုငျက ပုလှရေော အောကျပေးပါကောငျးတယျ။ တီခိုငျနဲ့က လိုးနကွေဆိုတော့ အပေးအယူမြှပွီး အရှကျလဲ ကုနျနပွေီလေ။
နောကျနေ့ တီခိုငျနဲ့ သူ့အိမျနားမှာ ခြိနျးလိုကျတယျ။ နာရီဝကျလောကျ အခြိနျဖွုနျးပွီးမှ သူ့အိမျကို ပွနျသှားတယျ။ နမြေိုး ဇာတျလမျးစနလေောကျမဲ့ အခြိနျပေါ့။ တံခါးကို အသံမမွညျအောငျဖှငျ့ပွီး တီခိုငျ့အခနျးထဲဝငျတယျ။ ကုတငျပျေါတကျပွီး တီခိုငျဖောကျထားတဲ့ အပေါကျကနခြေောငျးတယျ။ အခနျးနှဈခနျးကို ဖျောမီကာပွားနဲ့ခွားထားတယျ။ တီခိုငျက ဖောကျပွီး ပွက်ခဒိနျနဲ့ ကာထားတာ။ ကုတငျပျေါမှာ ကုနျးပွီး ကွညျ့ရတယျ။ တီဌေး အခနျးမှာ ကောငျးခနျးရောကျနပွေီ။ ကုတငျဘေးမှာ နမြေိုးက အဝတျဗလာနဲ့ လီးစုပျခံနတေယျ။ တီဌေးရဲ့ ပုလှပေညာက တိုးတကျလာပုံပဲ။ နမြေိုးက တီဌေးခေါငျးကို ကိုငျပွီး ပါးစပျကို တခါတခါဆောငျ့တယျ။ ကြှနျတျောလဲ တီခိုငျ့ကို “မမခိုငျ ဒီမှာလာကွညျ့” တီခိုငျလဲ အပွေးအလှား လေးဘကျထောကျပွီး ကွညျ့တယျ။ သူ့သားကို သူ့ညီမက ပုလှအေမှနျအကနျပေးနတောမွငျတော့ “ဘုရား ဘုရား ဘယျလိုတှဖွေဈကုနျတာလဲ။ အမြိုးအရငျးတှကေို။ မိဌေးကလညျး ကလေးကိုမတားဘူး။ ခကျတော့တာပါပဲ” ရငျဘတျကိုဖိပွီး ပကျလကျလှဲခလြိုကျတယျ။ “မမခိုငျ အသံမထှကျနဲ့” ကြှနျတျောထပျခြောငျးတော့ နမြေိုးက တီဌေးကို ဆျောနပွေီ။ လီးကလညျး တောငျလာပွီ။ တီခိုငျကို လိုးလိုကျရငျ ကောငျးမလား စဉျးစားတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသံထှကျရငျ ပွဿနာတကျမှာ။ ဒါနဲ့ တီခိုငျ့ကို အတငျးချေါပွီး အနီးအနားက တညျးခိုခနျးမှာ ဖွုတျလိုကျရတယျ။ စောကျဖုတျတခြီ ခရတေခြီ။
“ငါ့ကိုယျငါ နငျနဲ့ လိုးနလေို့ ဆိုးလှပွီ ထငျနတော။ မိဌေးက တူအရငျးနဲ့တောငျ လိုးနရေကျတယျ” “ဒီလိုပါပဲ မမခိုငျ သှေးသားဆန်ဒက တောငျ့တလို့ နမှောပါ” “ဘာဆိုငျလဲ လုပျစရာမှ အမြားကွီးကို။ အရငျးအခြာ မှ လိုးလို့ရတာ မဟုတျတာ” တီခိုငျကတော့ တျောတျောမကနြေပျနပေုံပါပဲ။ ကြှနျတျောမှားသှားလားမသိ။ “ဘာပွဿနာမှ မတကျရငျ လှတျထားပေးလိုကျပါလား မမခိုငျ” ခြှေးသိပျရုံကလှဲလို့ ကြှနျတျောလဲ ဘာမှ မတတျနိုငျဘူး။ နောကျရကျတှကြေ လပွေလေညျး ပွနျရောကျလာတော့ တီဌေးကို ဖွုတျဖို့ လှုပျရှားရတာ အဆငျမပွဘေူး။ တီခိုငျနဲ့ပဲ အပွငျမှာ ဆှဲဖွဈတယျ။ နမြေိုးကလညျး အိမျသိပျမကပျဘူး။ လပွေကေတြော့ မလှုပျရှားရဲဘူး။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ဂြေးအောငျးသှားနိုငျတယျ။ သတိနဲ့ ကိုငျတှယျမှ ရမယျ။ လပွေပွေနျလာတော့ တီဌေးနဲ့က သိပျမဆှဲဖွဈ။ အခုတလော ငတျနတေယျ။ ရငေတျတုနျး ရတှေငျးထဲကြ ဆိုသလို အိမျနားက ဘောပွားတယောကျ စာလာပေးတယျ။နာမညျက “အေးမွတျသန်တာ”။ သူက ဘောပွားဆိုပမေဲ့ ဘျောဒီက မိုကျတယျ။ ယောကျြားလိုပဲ ဝတျတယျ။ကြှနျတေျာ့ပုံကလဲ ဖွူဖွူနှဲ့နှဲ့ဆိုတော့ သူ့စိတျဝငျစားတယျ ထငျတယျ။ သူ့ကို ဖွုတျဖို့ ဖနျရမယျ။ သူက ကြှနျတျော နှဈဖကျခြှနျl ဆိုတာ သိပုံမရဘူး။ အတျောပါပဲ။
သူ့အိမျမှာ ခြိနျးဖွဈတယျ။ အရငျက သူ့အိမျမှာလဲ ယောကျြားတှေ တရုနျးရုနျးနဲ့ဆိုတော့ သူ့မိသားစုက သိပျစိတျမဝငျစားဘူး။ သူ့အခနျးထဲ နှဈယောကျတညျး။ သူက စနမျးတယျ။ သခြောပွနျနမျးပေးလိုကျတယျ။ ဟိုကိုငျ ဒီကိုငျနဲ့ လီးကိုတော့ မကိုငျဘူး။ အကြီင်္တှေ ခြှတျတယျ။ တကိုယျလုံး လိုကျနမျးတယျ။ သူက တီရှပျအောကျမှာ စှပျကယျြခံထားတယျ။ နို့ကိုငျတော့ အကိုငျမခံဘူး။ ဘောငျးဘီအောကျမှာ ယောကျြားဝတျ boxer နဲ့။ အေးမွတျ boxer ပါ ခြှတျခလြိုကျတယျ။ စောကျဖုတျမြားပျေါလာမလားလို့ သခြောကွညျ့တယျ။ ဘယျဟုတျမလဲ။ ခါးပတျနကျနဲ့ လီးတု ဖွောငျးခနဲ ထောငျထှကျလာတယျ။ လီးတုက အရှညျမသေး။ ခုနဈလကျမ ရှဈလကျမ လောကျရှိမယျ။ “အခဈြ ကိုယျ့လီး စုပျပေးမလား” အေးမွတျက မေးလိုကျတော့ စိတျထဲ ရယျခငျြသှားတယျ။ ဘဝက ဘောပွားရဲ့ လီးတုတောငျ စုပျပေးရမဲ့ ဘဝ။ တေးထားတယျ။ အေးမွတျကို အပေါကျစုံအောငျ လိုးမယျလို့။ အေးမွတျ ကနြေပျအောငျ သူ့လီးတုကို စုပျပေးလိုကျတယျ။ ငါးမိနဈလောကျ စုပျပေးပွီးတော့ သူက ကြှနျတေျာ့ကို ကုတငျပျေါတှနျးခလြိုကျတယျ။ သူ့လီးတုကို ကှနျဒုံးစှတျတယျ။ ကှနျဒုံးကို ဘယျလို ဝယျထားတာလဲ မသိဘူး။ gel လူးနတေယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့ဖငျကို gel တှေ သုတျတယျ။
မကျြနှာခငျြးဆိုငျကနေ လီးတုကို ထညျ့တယျ။ ခါးကို ညောငျ့တယျ။ မိနျးကလေးမို့ ဆောငျ့အားက သိပျမပွငျးဘူး။ ကြှနျတျောလညျး သူ့တငျပါးတှကေို ညှဈနယျနလေိုကျတယျ။ ဆယျမိနဈ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျဆောငျ့ပွီး တော့ ကြှနျတေျာ့ဘေးမှာ လှဲနတေယျ။ ကြှနျတျောက မပွီးသေးဘူး။ ဒါနဲ့ အေးမွတျကို “ငါ မပွီးသေးဘူး။ စုပျပေးပါလား” “ယောကျြားခငျြး မစုပျဘူးကှာ” “ခဈြရငျ လုပျပေးပါကှာ။ ငါမပွီးသေးလို့” အေးမွတျ စိတျကမပါ့တပါ ဖွဈနပေုံရတယျ။ သူက ဘောပွားဆိုပမေဲ့ မိနျးမပဲလေ။ “လာပါ အခဈြရာ။ ငါလဲ စုပျပေးတာပဲကို” ကြှနျတေျာ့လီးကို လာကိုငျတယျ။ ဖှဖှလေး ဂှငျးတိုကျသလို လုပျတယျ။ တဖွေးဖွေး ကြှနျတေျာ့လီးကလညျး ပွနျမာလာတယျ။ သူ သဘောကနြတေယျ။ အရှိနျမွငျ့ပွီး ဆကျထုတယျ။ ပွီးတော့ လီးကို တခကျြပဲ ရှတျခနဲ နမျးတယျ။ သူ့ အသကျရှူသံ ခပျပွငျးပွငျးက လီးကို လာထိတှနေ့တေယျ။ ကြှနျတျောလဲ သူလုပျသမြှ အစအဆုံးကွညျ့နတေယျ။ အေးမွတျ နှုတျခမျးကို မဟတဟ လုပျပွီး ဒဈကို ငုံတယျ။ ကြှနျတျောလညျး အားမရတာနဲ့ ကော့ပေးလိုကျတယျ။ တဝကျလောကျ ဝငျသှားတယျ။ အေးမွတျက မစုပျဘဲ ငုံရုံလေး ငုံထားတယျ။
“စုပျပေးလကှော အခဈြကလဲ။ ဒဈပတျလညျနဲ့ ကိုယျထညျကို လြှာနဲ့ လကျြပေး။ ပါးစပျဆနျ့သလောကျ ငုံပွီး သကွားလုံး စုပျသလို စုပျပေး၊ ဥတှကေိုလညျး ခပျဖှဖှ စုပျပေး” အေးမွတျလဲ ကြှနျတျောပွောတဲ့အတိုငျး လိုကျလုပျတယျ။ ဒဈဖြားလေးကို သူ့သှားနဲ့ ထိမိတော့ နာသှားတယျ။ ဒါပမေဲ့ မပွောရဲဘူး။ ဆကျမစုပျပေးရငျ ဒုက်ခ။ အေးမွတျက သငျလှယျတတျလှယျဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။ စုပျပေးနရေငျးနဲ့ ပါးစပျထဲမဝငျတဲ့ လီးရဲ့ အပိုငျးကို ထုပေးနတေယျ။ သိပျမကွာဘူး။ ကြှနျတျော သုကျထှကျခငျြလာတယျ။ အေးမွတျက စုပျနတေုနျးပဲ။ သူ့ပါးစပျထဲပဲ ထုတျလိုကျတယျ။ စစခငျြး နှဈခကျြလောကျတော့ ပါးစပျထဲဝငျပွီး သီးမလို ဖွဈသှားတယျ။ သုကျတှေ ထှကျလာတော့ သူလဲ လီးကို ပါးစပျက ထုတျလိုကျတယျ။ ဆကျထှကျတဲ့ သုကျတှကေ သူ့မကျြနှာကို ပနျးမိတယျ။ အေးမွတျ စိတျဆိုးသှားတယျထငျတယျ။ “မငျးကှာ ညဈပတျတယျ” “ဆောရီး မငျးစုပျပေးတာ ကောငျးလို့ပါကှာ” အေးမွတျ မကျြနှာပျေါက ကြှနျတေျာ့သုကျတှကေို တဈသြှူးနဲ့ ကွငျကွငျနာနာ သုတျပေးလိုကျတယျ။ အေးမွတျက မိနျးမဆနျဆနျ ပွုံးတယျ။ မိနျးမဟူသမြှ အနုအရှတော့ ကွိုကျကွတာပဲလေ။ သူ့ခေါငျးကို အသာဆှဲပွီး နှုတျခမျးခငျြး နမျးလိုကျတယျ။ နမျးနရေငျးနဲ့ သူ့ရငျဘတျတှေ တငျပါးတှကေို ကိုငျဆော့နတေယျ။ အေးမွတျက ဘာမှ မပွောဘဲ ငွိမျနတေယျ။
စှပျကယျြအောကျ လကျထညျ့ပွီး နို့နရောကို စမျးတော့ ဘရာကို စမျးမိတယျ။ အေးမွတျကလညျး ပစ်စညျးရှိ လူတနျးစားပါပဲ။ ဘရာခြိတျလေးကို အသာအယာဖွုတျတယျ။ တီခယျြခြိုရဲ့ ကြေးဇူးနဲ့ ဘရာခြိတျမြိုးစုံကို ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ဖွုတျတတျခဲ့တာပါ။ အေးမွတျလဲ ကဈဆငျဆှဲနတောကို ဖီးလျတကျနပေုံပါပဲ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှေ လကျညှိုး လကျမနဲ့ သှေးတိုးစမျးပွီး ခပြေေးတယျ။ အေးမွတျက ဘာမှ မတုနျ့ပွနျဘူး။ ဆိတျဆိတျနခွေငျးဟာ ဝနျခံခွငျးပဲ။ နမျးနရေငျး သူ့စှပျကယျြကို လှနျတငျလိုကျတယျ။ ကြှတျနတေဲ့ ဘရာကို ဖယျထုတျလိုကျတယျ။ နို့သီးခေါငျးကို စို့ရငျး တဖကျကို လကျနဲ့ ခတြေယျ။ အေးမွတျပါးစပျကလညျး တဟငျးဟငျး ညညျးနတေယျ။ သူ ဇိမျခံတတျနပွေီ။ သူ့ခါးကို စမျးပွီး လီးတုခါးပတျရဲ့ ခြိတျတှကေို ဖွုတျတယျ။ မရဘူး။ အေးမွတျလဲ စိတျမရှညျတဲ့ပုံနဲ့ သူကိုယျတိုငျ ဖွုတျပေးတယျ။ လီးတုကွီး ပွုတျသှားတာနဲ့ ကြှနျတျောလဲ ကုတငျဘေးကို ပဈခလြိုကျတယျ။ ဘောပွားတယောကျရဲ့ သိုဝှကျထားတဲ့ စောကျဖုတျဟာ အမှေးခပျပါးပါးနဲ့ ပနံရ လှပနတေယျ။ ကာမအရညျကွညျလေးတှကေ တလဲ့လဲ့နဲ့ပေါ့။
“လှလိုကျတဲ့ စောကျဖုတျကှာ” ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဆှဲကားပွီး မကျြနှာကို အေးမွတျစောကျဖုတျဆီ ထိုးအပျရငျး ရရှေတျလိုကျတယျ။ အေးမွတျရဲ့ စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသားလေးတှကေ စကေ့ပျနတေယျ။ ဘောပွားဆိုတော့ အပြိုစငျပါကငျ စောကျဖုတျရနံ့က သငျးနတောပါပဲ။ နှုတျခမျးသားလေးတှကေို ဆှဲဖွဲလိုကျပွီး အထဲကို ကွညျ့တယျ။ စောကျစိကို လြှာနဲ့ ကစားပေးတယျ။လြှာကို တောငျ့နအေောငျ လုပျပွီး စောကျခေါငျးထဲကို ထိုးမှတေယျ။ ဖငျဝကနေ စောကျစိအထိ လြှာနဲ့ အပွားလိုကျလကျြတယျ။ အေးမွတျဆီက စောကျရညျတှေ ဖငျဝအထိစီးကလြာတယျ။ အဲဒီတော့မှ ဘာဂြာမှုတျနရေငျး ခရအေဝလေးကို လကျမနဲ့ ဖိပှတျနတေယျ။ အေးမွတျက ညညျးသံခပျတိုးတိုးလေးပေးတယျ။ သူ့အိမျမှာဆိုတော့ မအျောရဲဘူးလေ။ စောကျစိကို လြှာနဲ့ လကျြလိုကျ ထိုးလိုကျလုပျနရေငျး စောကျဖုတျထဲ လကျခလယျထညျ့ဖို့ လုပျတယျ။ အဝက တငျးကပျြနတောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အပြိုမွှေးကို လကျနဲ့ ဖောကျမိသှားမှာစိုးလို့ ဖငျထဲပဲ ထညျ့လိုကျတယျ။ ဖငျကို ကလိ စောကျဖုတျကို ဂြာပေးနရေငျး အေးမွတျတခြီပွီးသှားတယျ။ အဖွူရောငျ အရညျခပျပဈြပဈြတှေ စီးကလြာတယျ။ ကြှနျတေျာ့ပါးစပျမှာလဲ အေးမွတျရဲ့ စောကျရညျတှနေဲ့ ပပှေနတောပါပဲ။ အပျေါပိုငျးကို ပွနျတကျပွီး ကဈဆငျပွနျဆှဲတယျ။ စောကျဖုတျကို လီးနဲ့ တထေ့ားတယျ။ စောကျစိနဲ့ နှုတျခမျးသားတှကေို ဒဈနဲ့ ပှတျဆှဲတယျ။ လီးကို စောကျဖုတျအမွောငျးလိုကျ တှနျးတငျတယျ။ နှုတျခမျးသားလေးတှကေို ဆှဲဖွဲပွီး ဒဈကို စသှငျးတယျ။
တငျးကပျြနတောပါပဲ။ တီခယျြခြို တီဌေးတို့က ပါကငျဖှငျ့ခံထားရပွီးသားဆိုတော့ အေးမွတျလောကျ မကပျြဘူး။ ပထမဆုံး အပြိုစငျ စောကျဖုတျကို ပါကငျဖှငျ့ရမှာဆိုတော့ အတငျးမထညျ့ရဲဘူး။ ဒဈကို ထုတျလိုကျ နညျးနညျးပိုသှငျးလိုကျ လုပျနတေယျ။ လီးတဝကျလောကျ ဝငျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ဆကျသှငျးလို့ မရဘူး။ အပြိုမွှေး ခံနတေယျ။ အပြိုမွှေးကို ထိုးခှဲလိုကျတဲ့အခြိနျ နာလို့ အေးမွတျထအျောရငျ ဒုက်ခရောကျမယျ။ ကဈဆငျပွနျဆှဲရငျး အထုတျအသှငျးကို ရသလောကျလုပျနတေယျ။ လုပျနရေငျး စိတျက မထိနျးနိုငျတာနဲ့ ဆောငျ့သှငျးလိုကျတယျ။ အေးမွတျမကျြနှာ ရှုံ့သှားပွီး အုခနဲ အျောတယျ။ ရုနျးတော့ မရုနျးဘူး။ လီးကို အဆုံးထိုးသှငျးလိုကျတယျ။ အေးမွတျရဲ့ စောကျမှေးတှနေဲ့ ကြှနျတေျာ့လီးအရငျး ထိကပျနတေယျ။ “အခဈြ ခဏသညျးခံ။ နောကျကရြငျ ကောငျးသှားမှာပါ” ဖတျဖူးတဲ့ အောစာအုပျတှေ ကွညျ့ဖူးတဲ့ Defloration ဇာတျကားတှထေဲကလို ပွောလိုကျတယျ။
အေးမွတျခေါငျးငွိမျ့ပွတယျ။ အေးမွတျရဲ့ လညျပငျးတှေ ဂုတျသားလေးတှကေို လိုကျနမျးတယျ။ နို့စို့တယျ။ ထောငျမတျနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို သှားနဲ့ ကိုကျပေးတယျ။ အောကျမှာလညျး လီးအဝငျအထှကျကို ဖွေးဖွေးလေး လုပျပေးနတေယျ။ လီးမှာ သှေးစသှေးနလေးတှေ ကပျနတေယျ။ အေးမွတျခံနိုငျလောကျပွီဆိုမှ ခပျမွနျမွနျဆောငျ့ပေးနတေယျ။ အခနျးထဲမှာ လီးအဝငျအထှကျ အသားခညျြး ထိတဲ့အသံနဲ့ အေးမွတျရဲ့ ညညျးသံခပျတိုးတိုး လှငျ့ပြံနတေယျ။ တငျးကပျြစေးပိုငျနတေဲ့ အပြိုစောကျဖုတျကို လိုးနရေတော့ ကွာကွာမလိုးနိုငျဘူး။ သုကျထှကျခငျြလာတာနဲ့ လီးကို အပွငျဆှဲထုတျပွီး အေးမွတျဗိုကျပျေါ ပနျးလိုကျတယျ။ အပြိုပါကငျဖောကျတာဆိုတော့ အရသာမသိမှာစိုးလို့ ကှနျဒုံးလဲ မစှပျထားဘူးလေ။ သုကျတှကေုနျအောငျ ထုတျပွီးတာနဲ့ အေးမွတျကို ဂြာပေးနလေိုကျတယျ။ သိပျမကွာဘူး။ သူလဲ ထပျပွီးသှားတယျ။ အေးမွတျဘေးမှာ ဝငျလှဲပွီး ဖကျထားလိုကျတယျ။
“ကောငျးလိုကျတာ အခဈြရော ကောငျးရဲ့လား” “အငျးးးးးးကောငျးတယျ” အေးမွတျက တိုးတိုးရရှေတျလိုကျတယျ။ “အျော ငါ့အဖွဈက မိနျးမကနေ ယောကျြားလြာဖွဈပွီး ပွနျခွောကျရတဲ့ ဘဝပါလား !!!” အေးမွတျတယောကျ ကြှနျတျောပါကငျဖှငျ့လိုကျပွီးတဲ့ နောကျပိုငျး မိနျးမဆနျလာပါတော့တယျ။ ရုပျခြော ကနျြးမာရေးကောငျးတဲ့ ပစ်စညျးရှိလူတနျးစား အေးမွတျကို ကြှနျတျောလကျမလှတျနိုငျပါဘူး။ သူ့အိမျမှာသာမက တညျးခိုခနျးမှာပါ ခဏ ခဏလိုးဖွဈတော့ အပေးအယူလညျးမြှလာပါတယျ။ နောကျပေါကျတော့ မဖှငျ့ဖွဈသေးဘူး။ မင်ျဂလာဦးညအတှကျ ခနျြထားမလို့လေ။ တခါတခါ အေးမွတျက ယောကျြားစိတျဝငျလာရငျတော့ လီးတုနဲ့ ဆျောပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျပိုငျးတော့ သူလဲ မလုပျတော့ပါဘူး။ ကြှနျတျောလဲ ပွညျ့စုံနဲ့ ဖငျမခံဖွဈတော့ပါဘူး။ တီဌေးနဲ့လဲ မလိုးဖွဈတော့ဘူး။ တကယျခဈြ တကယျမွတျနိုးရတဲ့ အေးမွတျ ရှိနပွေီလေ။ ခဈြသူနဲ့ အတူတူ အခြိနျဖွုနျးတဲ့ကာလတှဟော တကယျပြျောစရာ ကောငျးပါတယျ။ တယောကျနဲ့ တယောကျ အပွနျအလှနျနားလညျပွီး သစ်စာရှိရှိ ခဈြကွတယျ။ ဆေးကြောငျးသူ တယောကျဖွဈတဲ့ အေးမွတျ ဆရာဝနျ ဖွဈရငျ စစေ့ပျပွီး နှဈနှဈလောကျကွာရငျ လကျထပျဖို့ တိုငျပငျထားကွတယျ။ နှဈဖကျမိဘတှကေလညျး သဘောတူတယျ။ ဘယျလောကျသာယာတဲ့ ဘဝကွီးပါလဲ။
နမြေိုးက ရညျးစားရသှားတော့ အိမျသိပျမကပျဘူး။ တီဌေးကို ကြှနျတျောတယောကျတညျး မူပိုငျလို ဖွဈလာတယျ။ တီခိုငျ အပွငျသှားရငျ တီဌေးကို ဖွုတျတယျ။ လပွေလေဲ သငျတနျးတှတေကျနတေဲ့ အခြိနျပေါ့။ တီဌေးလဲ အရှကျကုနျနပွေီ။ သူက အပျေါမှာနပွေီး ဖငျထဲ လီးသှငျးတတျနပွေီ။ တီဌေးကို အထူးကုဆေးခနျးတခုမှာ ကလေးမရအောငျ လကျမောငျးထဲ ထညျ့တဲ့ ကိရိယာလေး ထညျ့ထားပေးလိုကျတယျ။ ၅ နှဈလောကျ စိတျခလြကျခကြဲလို့ ရအောငျလို့ပါ။ တီခိုငျကတော့ အပွငျမှာပဲ အဖွုတျခံပါတယျ။ ဘျောဒီတောငျ့တောငျ့ ညီအဈမ နှဈယောကျကို ဖွုတျနရေပမေဲ့ ကွာတော့ ရိုးလာတယျ။ လပွေကေလညျး တနတေ့ခွား အတောငျအလကျစုံပွီး ဖှံ့ဖွိုးလာတယျ။ ယောကျြားသဘာဝအရ လပွေကေို ဖွုတျဖို့ စဉျးစားတယျ။ လပွေကေ ကြှနျတေျာ့ကို မွငျရငျ ရှကျသလို ကွောကျသလိုနဲ့။ ဖွုတျပွီးရငျတော့ ရှကျခငျြမှ ရှကျမှာ။ တီဌေးတုနျးက သုံးတဲ့ လိငျကိစ တော့ ကနျြသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ မုဒိနျးမှု ဖွဈမှာကွောကျရတယျ။ တီခိုငျလိုလဲ မကွမျးရဲ။ သူ့ဟာသူ စိတျပါလာအောငျ မွှူဆှယျပွီးလိုးရမယျ။ တီဌေးကို လိုးနတေဲ့အခြိနျ လပွေရေောကျလာရငျ ခြောငျးကွညျ့မယျ။ ခြောငျးကွညျ့ဖနျမြားလာရငျ သူလညျး စိတျပါလာမှာပဲ။ ကြှနျတေျာ့စိတျကူးပေါ့လေ။
တကယျတမျးကတြော့ စိတျကူးကို အကောငျအထညျဖျောဖို့က မလှယျလှ။ တီဌေးက လပွေသေငျတနျးက ပွနျလာခြိနျနီးရငျ အဖွုတျမခံဘူး။ အခနျးတံခါးကိုလဲ သတိထားပွီး လော့ပုံမှနျခတြယျ။ တီခိုငျကတြော့လညျး အပွငျမှာ ဖွုတျရတာဆိုတော့ ဘာမှကွံစညျလို့မရဘူး။ နမြေိုးကို စညျးရုံးပွီး လပွေကေို ဖွုတျဖို့ ပွောလညျးမရ။ သူ့မှာ အေးမွတျရှိနပွေီးသား ဖွဈနတေယျ။ အေးမွတျက ဘောပွားဘဝက သိပျမသိသာပမေဲ့ မိနျးမလိုဝတျတော့ ရုပျထှကျတယျ။ နမြေိုး ဘယျလောကျတောငျ ဖွုတျထားလဲမသိဘူး။ တငျပါးက ရမျးခါနတော။ အေးမွတျအိုးကို မွငျတိုငျး အပြိုစဈ မစဈခှဲတဲ့ စာခြိုးလေးကို သှားသတိရတယျ။ “အပြိုစဈတုံ တငျပါးဆုံ နိမျ့တုံ မွငျ့တုံ ခုနျလိမျ့မညျ” “အပြိုမစဈ ထိုကာတဈ တငျဆဈရမျး၍ ခါလိမျ့မညျ” အေးမွတျကိုလဲ ဖွုတျခငျြမိတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူငယျခငျြးအရငျးကွီးမို့ သစ်စာဖောကျရာကမြယျ။ သူ၊ သူ့အမနေဲ့ သူအဒျေါကို စိတျကွိုကျလိုးနခေဲ့ပွီးပွီ။ သူ့ခဈြသူတော့ ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ အခုရကျပိုငျးတော့ တီခိုငျလဲ သူ့အမြိုးသား ပွနျလာလို့ နမြေိုးတောငျ မချေါဘဲ ခရီးထှကျသှားတယျ။ နမြေိုးကလဲ အိမျမကပျဘူး။ အေးမွတျနဲ့ပဲ အခြိနျကုနျနတေယျ ထငျပါရဲ့။ တနတေ့ော့ မနကျစောစော တီဌေးကို စောကျဖုတျ တခြီ ဖငျ တခြီလိုးပွီး အိမျကို ပွနျလာတယျ။ ဖှငျ့ရကျမို့ အဖရေော အမပေါ ရုံးသှားနကွေပုံရတယျ။ အိမျသော့ဖှငျ့ပွီး ဝငျလာတော့ အမေ့ ဖိနပျနဲ့ တခွားဖိနပျ တရံ တှတေ့ယျ။ ဘယျလိုပါလိမျ့လို့ စိတျဝငျစားပွီး အမတေို့ အိပျခနျးနားသှားခြောငျးတယျ။ အခနျး မရောကျခငျက အမရေဲ့ ညညျးသံ ယောကျြားတယောကျရဲ့ မာနျသှငျးသံ အသားခငျြး ရိုကျသံတှကေ ဆူညံနတေယျ။ အခနျးတံခါးက မဟတဟလေး။ ခြောငျးကွညျ့လိုကျတော့ အမကေ လေးဘကျထောကျလကျြသား။ နောကျက လူက အမေ့ ခါးကို ကိုငျပွီး လီးကို ဆောငျ့ဆောငျ့သှငျးနတေယျ။ သူ့လီးက အမခေ့ရထေဲ ဝငျခညျြ ထှကျခညျြ။ သူ့မကျြနှာကို မွငျတော့ ကြှနျတေျာ့ခေါငျးတခုလုံး ခြာခြာလညျ သှားတယျ။ အမကေို့ ဖငျလိုးနတေဲ့သူကတော့ … * ပွီးပါပွီ *
ကျွန်တော် တကယ်ချစ်ခဲ့မိသော အခါ
နေမျိုးတို့အိမ်သွားတော့ တီဌေးက ရှောင်နေတုန်းပါပဲ။ ၃၄ နှစ်ထိ စောင့်စည်းလာတဲ့ အပျိုကြီး ခုတော့ ရှက်နေရှာမှာ။ နေမျိုးက တီဌေးကို ကြည့်ပြီး မျက်စိမှိတ်ပြတယ်။ သိပ်မကြာဘူး သားအမိနှစ်ယောက် ဈေးဝယ်ထွက်သွားတယ်။ တီဌေးကို ဖန်လို့ရအောင် နေမျိုးက ရှောင်ပေးတာပဲ။ တီဌေးနဲ့ ကျွန်တော်ပဲ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်။ “တီဌေး ဟိုညက ပျော်ရဲ့လား” မဖြေပါဘူး။ မျက်နှာကြီးနီပြီး တီဗီထဲ စိတ်ဝင်စားသလို လုပ်နေတယ်။ “တီဌေး မဖြေရင် video တွေ အင်တာနက်ပေါ်တင်မှာနော်” “ဆေးခပ်ပြီး မဟုတ်တာ ဝိုင်းလုပ်တာ ဘာလို့ပျော်ရမှာလဲ” တီဌေးက မျက်စောင်းထိုးရင်း ဖြေတယ်။ “ဒါဆို နေမျိုး လုပ်ပေးတုန်းက ပျော်တယ်ပေါ့” တီဌေး ပြန်မဖြေဘဲ ခေါင်းငုံ့နေတယ်။ တူအရင်းလိုးတာခံရတော့ ရှက်နေတယ်ထင်တာပဲ။ တီဌေးဘေးကို သွားထိုင်လိုက်တယ်။ တီဌေးက အိမ်နေရင်းမို့ တီရှပ်အဟောင်းနဲ့ စပန့်သားဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ထားတယ်။ ပေါင်တွေကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ရွရွလေးပွတ်ပေးတယ်။ တီဌေးလက်ကလာဖယ်တယ်။ ပါးလေးကို နမ်းပြီး “ပျော်ကြရအောင် တီဌေးရာ” ငြိမ်နေတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီး လျှာထိုးထည့်တယ်။
အသက်မပါသလို တီဌေးကနေနေတယ်။ နမ်းနေရင်း တီရှပ်ထဲ လက်လျှိုပြီး ဘရာချိတ်ကို ဖြုတ်တယ်။ နို့သီးခေါင်းတွေကို လက်နဲ့ချေတယ်။ နည်းနည်းကြာအောင် နှုးပြီး တီဌေးဘောင်းဘီကို နှိုက်လိုက်တော့ အရည်တွေရွှဲနေပြီ။ “အခန်းထဲသွားရအောင်” တီဌေးကို ဆွဲထူခေါ်ရင်း ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ မလိုက်ချင် လိုက်ချင်နဲ့ပါလာတယ်။ အခန်းတံခါးကို လော့သေချာချပြီး ပိတ်တယ်။ တီဌေးက ကုတင်ပေါ်မှာ မျက်နှာပေါ် ခေါင်းအုံးကြီးနဲ့ ကာထားတယ်။ ခွင့်ပြုတဲ့သဘောပဲ။ အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်တယ်။ တီဌေးရဲ့စပန့်သား ဘောင်းဘီကို ချွတ်တယ်။ ခြေထောက်ကိုကားပြီး ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ ပင်တီက အနီရင့်ရင့်နဲ့ အရည်တွေရွှဲနေပြီ။ ပင်တီပေါ်ကနေ နမ်းပေးတယ်။ အစေ့ရှိမဲ့နေရာ မှန်းပြီး လျှာနဲ့ထိုးတယ်။ တီဌေးကတော့ ဘာမှမတုန့်ပြန်သေးဘူး။ ပင်တီကို မချွတ်ဘဲ ဘေးကိုဖယ်ပြီး ဘာဂျာစကိုင်တယ်။ အရည်တွေက စိမ့်စိမ့်ပြီးထွက်လာတယ်။ ပင်တီကို ချွတ်တော့ တီဌေးက ဖင်ကို ကြွပေးတယ်။ အရည်တွေက ဖင်ဝအထိ စီးကျနေတယ်။ ဘာဂျာဆွဲရင်း ဖင်ဝကို လက်ခလယ်ထည့်မွှေတယ်။ နေမျိုး ချပြီးသားမို့ ခရေဝက လက်ခလယ်ဝင်လာတာကို ဖွင့်ပေးတယ်။
တီဌေးက မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးနဲ့ ကွယ်ထားတယ်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်တွန်းတင်လိုက်တယ်။ ဖင်ဝပေါ်လာအောင်လို့ပါ။ မျက်နှာချင်းဆိုင် တီဌေးကို ကြည့်ရင်း ခရေခြွေချင်တာ။ gel ဘူးအဆင်သင့်မရှိဘူး။ တီဌေးရဲ့ ကုတင်ဘေး မှန်တင်ခုံမှာတော့ Ginvera သံလွင်ဆီဘူးလေးတွေ့တယ်။ ကွန်ဒုံးစွပ်တယ်။ သံလွင်ဆီလေး သုံးပြီး ဒစ်စထည့်တယ်။ တီဌေးဖင်က နေမျိုးရဲ့ ဂေါ်လီတောင် ခံထားဖူးတော့ အခု သိပ်မနာဘူးထင်တယ်။ တထစ်ချင်းချော့သွင်းပြီး ဆုံးသွားတော့ ခဏစိမ်ထားတယ်။ စောက်စေ့လေးကို ကလိတယ်။ တီဌေးက ရှက်တာလား စိတ်ဆိုးတာလား မသိ လုံးဝမလှုပ်မယှက်နဲ့။ နည်းနည်းလေး ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက် စလုပ်တယ်။ အစပိုင်းတော့ ခပ်ဖြေးဖြေးပဲ။ ခြေထောက်တွေကို လိုးနေရင်း ရင်ဘတ်ထိကပ်အောင် တွန်းထားလိုက်တယ်။ အရှိန်တင်ပြီး ဆောင့်တယ်။ ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်တော့ တီဌေး အောက်ကပင့်လာတယ်။ မျက်နှာကွယ်ထားတဲ့ ခေါင်းအုံးကို အတင်းလုယူတယ်။ ခေါင်းအုံးပါသွားတော့ မျက်စိမှတ်ပြီး အံကြိတ်ထားတယ်။
ဖင်ထဲလီးထည့်ထားရင်း နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းတယ်။ လည်ပင်းနားကို မာကင်ရာပေါ်အောင် ဆွဲစုပ်လိုက်တယ်။ တီရှပ်ကို ဆွဲလှန်ပြီး နို့စို့တယ်။ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီး လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ကွန်ဒုံးကို ချွတ်တယ်။ ဂေါ်လီပါတဲ့ ကွန်ဒုံးပြောင်းစွပ်တယ်။ တီဌေး စောက်စေ့ကို တချက် နှစ်ချက်ပွတ်ဆွဲပြီး အဝမှာတေ့ တချက်တည်း ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။ “အား ကျွတ် ကျွတ် သေပါပြီ အရမ်းလုပ်ရလား ပြည့်စုံရယ်” “တီဌေး ကောင်းအောင်လို့ပါ နာရင် ခဏသည်းခံနော် ကောင်းလာလိမ့်မယ်” တီဌေး စောက်ဖုတ်က တင်းကျပ်နေဆဲဆိုတော့ သိပ်ကြာကြာဆွဲမလိုးနိုင်ဘူး။ သုက်တွေထွက်ချင်လာတာနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်ပြီး စိမ်ထားလိုက်တယ်။ သုက်တွေကုန်မှ လီးမပျော့ခင် ဆွဲထုတ်ပြီး ကွန်ဒုံးကို ချွတ်တယ်။ ပြီးတော့ တီဌေးကို ဂျာပေးလိုက်တယ်။ တီဌေးလဲ ပြီးထားပုံတော့ရတယ်။ တီဌေးဘေးမှာ ဝင်အိပ်ပြီး ဖက်ထားလိုက်တယ်။ “ချစ်လိုက်တာ တီဌေးရယ်” “ချစ်ရင် အဲလိုလုပ်ရတာလား။ နေမျိုးကိုလဲ လုပ်နေတာ တွေ့ဖူးတယ်နော်။ နေမျိုးကိုလဲ ချစ်တယ်ပေါ့” မြတ်စွာဘုရား တီခိုင်တင်မက တီဌေးပါ သိနေတယ်။ “တီဌေး ဘယ်လိုသိတာလဲ” “ပက်ပင်းကြီး မြင်တာလေ။ မခိုင်နဲ့ လေပြေတောင်ပါသေး” တီခိုင်က ကျန်တဲ့သူတွေပါ သိတာ မပြောဘဲ ထားတာကို။ စကားပြောရင်း လက်က တီဌေးနို့တွေကို ဆုပ်နယ်ပေးနေတယ်။ စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းချင်တာနဲ့
“မရှက်နဲ့တော့နော် တီဌေး” လို့ပြောရင်း နောက်တချီစဖို့ အစပျိုးတယ်။ လက်က စောက်ဖုတ်ကို ရွရွလေးပွတ်ရင်း နို့စို့ပေးနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အိမ်ရှေ့က ဘဲလ်တီးသံကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အဝတ်အစားအမြန်ဝတ်ပြီး တံခါးသွားဖွင့်ရတယ်။ တီခိုင်တို့သားအမိ ပြန်လာတာပါ။ တီဌေးက နေသိပ်မကောင်းလို့ အိပ်နေတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ နေမျိုးက ငါသိပါတယ်ကွာဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်တယ်။ တီခိုင် နေမျိုးတို့နဲ့ ခဏစကားစမြည်ပြောပြီးတော့ အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ညကျတော့ တီခိုင် ဖုန်းဆက်လာတယ်။ “ပြည့်စုံ ဒီနေ့ ကျင်ဌေးကို လိုးလိုက်လား” “ဟာ မလုပ်ရဲပါဘူး မမခိုင်။ မမကိုတောင် ချစ်လွန်းလို့ စွန့်စားပြီး လုပ်လိုက်ရတာပါ” “ဒါဆို နင်တို့ ငါမရှိတုန်း ဘာလုပ်နေကြလဲ” “ကျွန်တော်က တီဗွီကြည့်တယ်။ တီဌေးက နေမကောင်းလို့ဆိုပြီး အခန်းထဲ ဝင်အိပ်နေတယ်” “ဟုတ်လို့လား ကျင်ဌေးအခန်းထဲ ညနေကစကားသွားပြောတော့ နင်သုံးနေကြ ကွန်ဒုံးတွေ့တယ်နော်။ အပျိုကြီးရဲ့ အခန်းထဲ အဲဒါ ရှိနေစရာလား။ ပြီးတော့ လိုးထားတဲ့ အနံ့လဲ ရသလိုပဲ” “မမခိုင် အခန်းကနေ တီဌေးအခန်းကို ချောင်းလို့ရအောင် လုပ်ထား။ မနက်ဖြန် ဘယ်သူလိုးနေလဲ ကျွန်တော်ပြမယ်။ အိမ်က ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ထွက်လာခဲ့။ သော့အပိုယူလာခဲ့” တီခိုင်လစ်ရင် နေမျိုးက တီဌေးကို ဖြုတ်မှာပဲ။ အဲဒါ တီခိုင်ကို ပြရမယ်။ သူ့ညီမကို ကျွန်တော် အလွတ်မပေးဘူးဆိုတာ သူသိရင် စားပေါက်ပိတ်မှာစိုးလို့။ တီဌေးက အပျိုမို့ စောက်ဖုတ်က အလတ်ကြီး ရှိသေးပေမဲ့ အိမ်ထောင်သည် တီခိုင်က ပုလွေရော အောက်ပေးပါကောင်းတယ်။ တီခိုင်နဲ့က လိုးနေကြဆိုတော့ အပေးအယူမျှပြီး အရှက်လဲ ကုန်နေပြီလေ။
နောက်နေ့ တီခိုင်နဲ့ သူ့အိမ်နားမှာ ချိန်းလိုက်တယ်။ နာရီဝက်လောက် အချိန်ဖြုန်းပြီးမှ သူ့အိမ်ကို ပြန်သွားတယ်။ နေမျိုး ဇာတ်လမ်းစနေလောက်မဲ့ အချိန်ပေါ့။ တံခါးကို အသံမမြည်အောင်ဖွင့်ပြီး တီခိုင့်အခန်းထဲဝင်တယ်။ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး တီခိုင်ဖောက်ထားတဲ့ အပေါက်ကနေချောင်းတယ်။ အခန်းနှစ်ခန်းကို ဖော်မီကာပြားနဲ့ခြားထားတယ်။ တီခိုင်က ဖောက်ပြီး ပြက္ခဒိန်နဲ့ ကာထားတာ။ ကုတင်ပေါ်မှာ ကုန်းပြီး ကြည့်ရတယ်။ တီဌေး အခန်းမှာ ကောင်းခန်းရောက်နေပြီ။ ကုတင်ဘေးမှာ နေမျိုးက အဝတ်ဗလာနဲ့ လီးစုပ်ခံနေတယ်။ တီဌေးရဲ့ ပုလွေပညာက တိုးတက်လာပုံပဲ။ နေမျိုးက တီဌေးခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကို တခါတခါဆောင့်တယ်။ ကျွန်တော်လဲ တီခိုင့်ကို “မမခိုင် ဒီမှာလာကြည့်” တီခိုင်လဲ အပြေးအလွှား လေးဘက်ထောက်ပြီး ကြည့်တယ်။ သူ့သားကို သူ့ညီမက ပုလွေအမှန်အကန်ပေးနေတာမြင်တော့ “ဘုရား ဘုရား ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ အမျိုးအရင်းတွေကို။ မိဌေးကလည်း ကလေးကိုမတားဘူး။ ခက်တော့တာပါပဲ” ရင်ဘတ်ကိုဖိပြီး ပက်လက်လှဲချလိုက်တယ်။ “မမခိုင် အသံမထွက်နဲ့” ကျွန်တော်ထပ်ချောင်းတော့ နေမျိုးက တီဌေးကို ဆော်နေပြီ။ လီးကလည်း တောင်လာပြီ။ တီခိုင်ကို လိုးလိုက်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံထွက်ရင် ပြဿနာတက်မှာ။ ဒါနဲ့ တီခိုင့်ကို အတင်းခေါ်ပြီး အနီးအနားက တည်းခိုခန်းမှာ ဖြုတ်လိုက်ရတယ်။ စောက်ဖုတ်တချီ ခရေတချီ။
“ငါ့ကိုယ်ငါ နင်နဲ့ လိုးနေလို့ ဆိုးလှပြီ ထင်နေတာ။ မိဌေးက တူအရင်းနဲ့တောင် လိုးနေရက်တယ်” “ဒီလိုပါပဲ မမခိုင် သွေးသားဆန္ဒက တောင့်တလို့ နေမှာပါ” “ဘာဆိုင်လဲ လုပ်စရာမှ အများကြီးကို။ အရင်းအချာ မှ လိုးလို့ရတာ မဟုတ်တာ” တီခိုင်ကတော့ တော်တော်မကျေနပ်နေပုံပါပဲ။ ကျွန်တော်မှားသွားလားမသိ။ “ဘာပြဿနာမှ မတက်ရင် လွှတ်ထားပေးလိုက်ပါလား မမခိုင်” ချွေးသိပ်ရုံကလွဲလို့ ကျွန်တော်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ နောက်ရက်တွေကျ လေပြေလည်း ပြန်ရောက်လာတော့ တီဌေးကို ဖြုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားရတာ အဆင်မပြေဘူး။ တီခိုင်နဲ့ပဲ အပြင်မှာ ဆွဲဖြစ်တယ်။ နေမျိုးကလည်း အိမ်သိပ်မကပ်ဘူး။ လေပြေကျတော့ မလှုပ်ရှားရဲဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် ဂျေးအောင်းသွားနိုင်တယ်။ သတိနဲ့ ကိုင်တွယ်မှ ရမယ်။ လေပြေပြန်လာတော့ တီဌေးနဲ့က သိပ်မဆွဲဖြစ်။ အခုတလော ငတ်နေတယ်။ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျ ဆိုသလို အိမ်နားက ဘောပြားတယောက် စာလာပေးတယ်။နာမည်က “အေးမြတ်သန္တာ”။ သူက ဘောပြားဆိုပေမဲ့ ဘော်ဒီက မိုက်တယ်။ ယောက်ျားလိုပဲ ဝတ်တယ်။ကျွန်တော့်ပုံကလဲ ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့ဆိုတော့ သူ့စိတ်ဝင်စားတယ် ထင်တယ်။ သူ့ကို ဖြုတ်ဖို့ ဖန်ရမယ်။ သူက ကျွန်တော် နှစ်ဖက်ချွန်l ဆိုတာ သိပုံမရဘူး။ အတော်ပါပဲ။
သူ့အိမ်မှာ ချိန်းဖြစ်တယ်။ အရင်က သူ့အိမ်မှာလဲ ယောက်ျားတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ဆိုတော့ သူ့မိသားစုက သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး။ သူ့အခန်းထဲ နှစ်ယောက်တည်း။ သူက စနမ်းတယ်။ သေချာပြန်နမ်းပေးလိုက်တယ်။ ဟိုကိုင် ဒီကိုင်နဲ့ လီးကိုတော့ မကိုင်ဘူး။ အကျီင်္တွေ ချွတ်တယ်။ တကိုယ်လုံး လိုက်နမ်းတယ်။ သူက တီရှပ်အောက်မှာ စွပ်ကျယ်ခံထားတယ်။ နို့ကိုင်တော့ အကိုင်မခံဘူး။ ဘောင်းဘီအောက်မှာ ယောက်ျားဝတ် boxer နဲ့။ အေးမြတ် boxer ပါ ချွတ်ချလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်များပေါ်လာမလားလို့ သေချာကြည့်တယ်။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ခါးပတ်နက်နဲ့ လီးတု ဖြောင်းခနဲ ထောင်ထွက်လာတယ်။ လီးတုက အရှည်မသေး။ ခုနစ်လက်မ ရှစ်လက်မ လောက်ရှိမယ်။ “အချစ် ကိုယ့်လီး စုပ်ပေးမလား” အေးမြတ်က မေးလိုက်တော့ စိတ်ထဲ ရယ်ချင်သွားတယ်။ ဘဝက ဘောပြားရဲ့ လီးတုတောင် စုပ်ပေးရမဲ့ ဘဝ။ တေးထားတယ်။ အေးမြတ်ကို အပေါက်စုံအောင် လိုးမယ်လို့။ အေးမြတ် ကျေနပ်အောင် သူ့လီးတုကို စုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ငါးမိနစ်လောက် စုပ်ပေးပြီးတော့ သူက ကျွန်တော့်ကို ကုတင်ပေါ်တွန်းချလိုက်တယ်။ သူ့လီးတုကို ကွန်ဒုံးစွတ်တယ်။ ကွန်ဒုံးကို ဘယ်လို ဝယ်ထားတာလဲ မသိဘူး။ gel လူးနေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဖင်ကို gel တွေ သုတ်တယ်။
မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ လီးတုကို ထည့်တယ်။ ခါးကို ညောင့်တယ်။ မိန်းကလေးမို့ ဆောင့်အားက သိပ်မပြင်းဘူး။ ကျွန်တော်လည်း သူ့တင်ပါးတွေကို ညှစ်နယ်နေလိုက်တယ်။ ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ဆောင့်ပြီး တော့ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ လှဲနေတယ်။ ကျွန်တော်က မပြီးသေးဘူး။ ဒါနဲ့ အေးမြတ်ကို “ငါ မပြီးသေးဘူး။ စုပ်ပေးပါလား” “ယောက်ျားချင်း မစုပ်ဘူးကွာ” “ချစ်ရင် လုပ်ပေးပါကွာ။ ငါမပြီးသေးလို့” အေးမြတ် စိတ်ကမပါ့တပါ ဖြစ်နေပုံရတယ်။ သူက ဘောပြားဆိုပေမဲ့ မိန်းမပဲလေ။ “လာပါ အချစ်ရာ။ ငါလဲ စုပ်ပေးတာပဲကို” ကျွန်တော့်လီးကို လာကိုင်တယ်။ ဖွဖွလေး ဂွင်းတိုက်သလို လုပ်တယ်။ တဖြေးဖြေး ကျွန်တော့်လီးကလည်း ပြန်မာလာတယ်။ သူ သဘောကျနေတယ်။ အရှိန်မြင့်ပြီး ဆက်ထုတယ်။ ပြီးတော့ လီးကို တချက်ပဲ ရွှတ်ခနဲ နမ်းတယ်။ သူ့ အသက်ရှူသံ ခပ်ပြင်းပြင်းက လီးကို လာထိတွေ့နေတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သူလုပ်သမျှ အစအဆုံးကြည့်နေတယ်။ အေးမြတ် နှုတ်ခမ်းကို မဟတဟ လုပ်ပြီး ဒစ်ကို ငုံတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အားမရတာနဲ့ ကော့ပေးလိုက်တယ်။ တဝက်လောက် ဝင်သွားတယ်။ အေးမြတ်က မစုပ်ဘဲ ငုံရုံလေး ငုံထားတယ်။
“စုပ်ပေးလေကွာ အချစ်ကလဲ။ ဒစ်ပတ်လည်နဲ့ ကိုယ်ထည်ကို လျှာနဲ့ လျက်ပေး။ ပါးစပ်ဆန့်သလောက် ငုံပြီး သကြားလုံး စုပ်သလို စုပ်ပေး၊ ဥတွေကိုလည်း ခပ်ဖွဖွ စုပ်ပေး” အေးမြတ်လဲ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်တယ်။ ဒစ်ဖျားလေးကို သူ့သွားနဲ့ ထိမိတော့ နာသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြောရဲဘူး။ ဆက်မစုပ်ပေးရင် ဒုက္ခ။ အေးမြတ်က သင်လွယ်တတ်လွယ်ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။ စုပ်ပေးနေရင်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲမဝင်တဲ့ လီးရဲ့ အပိုင်းကို ထုပေးနေတယ်။ သိပ်မကြာဘူး။ ကျွန်တော် သုက်ထွက်ချင်လာတယ်။ အေးမြတ်က စုပ်နေတုန်းပဲ။ သူ့ပါးစပ်ထဲပဲ ထုတ်လိုက်တယ်။ စစချင်း နှစ်ချက်လောက်တော့ ပါးစပ်ထဲဝင်ပြီး သီးမလို ဖြစ်သွားတယ်။ သုက်တွေ ထွက်လာတော့ သူလဲ လီးကို ပါးစပ်က ထုတ်လိုက်တယ်။ ဆက်ထွက်တဲ့ သုက်တွေက သူ့မျက်နှာကို ပန်းမိတယ်။ အေးမြတ် စိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်တယ်။ “မင်းကွာ ညစ်ပတ်တယ်” “ဆောရီး မင်းစုပ်ပေးတာ ကောင်းလို့ပါကွာ” အေးမြတ် မျက်နှာပေါ်က ကျွန်တော့်သုက်တွေကို တစ်သျှူးနဲ့ ကြင်ကြင်နာနာ သုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အေးမြတ်က မိန်းမဆန်ဆန် ပြုံးတယ်။ မိန်းမဟူသမျှ အနုအရွတော့ ကြိုက်ကြတာပဲလေ။ သူ့ခေါင်းကို အသာဆွဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းလိုက်တယ်။ နမ်းနေရင်းနဲ့ သူ့ရင်ဘတ်တွေ တင်ပါးတွေကို ကိုင်ဆော့နေတယ်။ အေးမြတ်က ဘာမှ မပြောဘဲ ငြိမ်နေတယ်။
စွပ်ကျယ်အောက် လက်ထည့်ပြီး နို့နေရာကို စမ်းတော့ ဘရာကို စမ်းမိတယ်။ အေးမြတ်ကလည်း ပစ္စည်းရှိ လူတန်းစားပါပဲ။ ဘရာချိတ်လေးကို အသာအယာဖြုတ်တယ်။ တီချယ်ချိုရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဘရာချိတ်မျိုးစုံကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြုတ်တတ်ခဲ့တာပါ။ အေးမြတ်လဲ ကစ်ဆင်ဆွဲနေတာကို ဖီးလ်တက်နေပုံပါပဲ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ လက်ညှိုး လက်မနဲ့ သွေးတိုးစမ်းပြီး ချေပေးတယ်။ အေးမြတ်က ဘာမှ မတုန့်ပြန်ဘူး။ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ ဝန်ခံခြင်းပဲ။ နမ်းနေရင်း သူ့စွပ်ကျယ်ကို လှန်တင်လိုက်တယ်။ ကျွတ်နေတဲ့ ဘရာကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ နို့သီးခေါင်းကို စို့ရင်း တဖက်ကို လက်နဲ့ ချေတယ်။ အေးမြတ်ပါးစပ်ကလည်း တဟင်းဟင်း ညည်းနေတယ်။ သူ ဇိမ်ခံတတ်နေပြီ။ သူ့ခါးကို စမ်းပြီး လီးတုခါးပတ်ရဲ့ ချိတ်တွေကို ဖြုတ်တယ်။ မရဘူး။ အေးမြတ်လဲ စိတ်မရှည်တဲ့ပုံနဲ့ သူကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ပေးတယ်။ လီးတုကြီး ပြုတ်သွားတာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ကုတင်ဘေးကို ပစ်ချလိုက်တယ်။ ဘောပြားတယောက်ရဲ့ သိုဝှက်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာ အမွေးခပ်ပါးပါးနဲ့ ပနံရ လှပနေတယ်။ ကာမအရည်ကြည်လေးတွေက တလဲ့လဲ့နဲ့ပေါ့။
“လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကွာ” ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားပြီး မျက်နှာကို အေးမြတ်စောက်ဖုတ်ဆီ ထိုးအပ်ရင်း ရေရွတ်လိုက်တယ်။ အေးမြတ်ရဲ့ စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက စေ့ကပ်နေတယ်။ ဘောပြားဆိုတော့ အပျိုစင်ပါကင် စောက်ဖုတ်ရနံ့က သင်းနေတာပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး အထဲကို ကြည့်တယ်။ စောက်စိကို လျှာနဲ့ ကစားပေးတယ်။လျှာကို တောင့်နေအောင် လုပ်ပြီး စောက်ခေါင်းထဲကို ထိုးမွှေတယ်။ ဖင်ဝကနေ စောက်စိအထိ လျှာနဲ့ အပြားလိုက်လျက်တယ်။ အေးမြတ်ဆီက စောက်ရည်တွေ ဖင်ဝအထိစီးကျလာတယ်။ အဲဒီတော့မှ ဘာဂျာမှုတ်နေရင်း ခရေအဝလေးကို လက်မနဲ့ ဖိပွတ်နေတယ်။ အေးမြတ်က ညည်းသံခပ်တိုးတိုးလေးပေးတယ်။ သူ့အိမ်မှာဆိုတော့ မအော်ရဲဘူးလေ။ စောက်စိကို လျှာနဲ့ လျက်လိုက် ထိုးလိုက်လုပ်နေရင်း စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ခလယ်ထည့်ဖို့ လုပ်တယ်။ အဝက တင်းကျပ်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အပျိုမြှေးကို လက်နဲ့ ဖောက်မိသွားမှာစိုးလို့ ဖင်ထဲပဲ ထည့်လိုက်တယ်။ ဖင်ကို ကလိ စောက်ဖုတ်ကို ဂျာပေးနေရင်း အေးမြတ်တချီပြီးသွားတယ်။ အဖြူရောင် အရည်ခပ်ပျစ်ပျစ်တွေ စီးကျလာတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှာလဲ အေးမြတ်ရဲ့ စောက်ရည်တွေနဲ့ ပေပွနေတာပါပဲ။ အပေါ်ပိုင်းကို ပြန်တက်ပြီး ကစ်ဆင်ပြန်ဆွဲတယ်။ စောက်ဖုတ်ကို လီးနဲ့ တေ့ထားတယ်။ စောက်စိနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဒစ်နဲ့ ပွတ်ဆွဲတယ်။ လီးကို စောက်ဖုတ်အမြောင်းလိုက် တွန်းတင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ဆွဲဖြဲပြီး ဒစ်ကို စသွင်းတယ်။
တင်းကျပ်နေတာပါပဲ။ တီချယ်ချို တီဌေးတို့က ပါကင်ဖွင့်ခံထားရပြီးသားဆိုတော့ အေးမြတ်လောက် မကျပ်ဘူး။ ပထမဆုံး အပျိုစင် စောက်ဖုတ်ကို ပါကင်ဖွင့်ရမှာဆိုတော့ အတင်းမထည့်ရဲဘူး။ ဒစ်ကို ထုတ်လိုက် နည်းနည်းပိုသွင်းလိုက် လုပ်နေတယ်။ လီးတဝက်လောက် ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဆက်သွင်းလို့ မရဘူး။ အပျိုမြှေး ခံနေတယ်။ အပျိုမြှေးကို ထိုးခွဲလိုက်တဲ့အချိန် နာလို့ အေးမြတ်ထအော်ရင် ဒုက္ခရောက်မယ်။ ကစ်ဆင်ပြန်ဆွဲရင်း အထုတ်အသွင်းကို ရသလောက်လုပ်နေတယ်။ လုပ်နေရင်း စိတ်က မထိန်းနိုင်တာနဲ့ ဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်။ အေးမြတ်မျက်နှာ ရှုံ့သွားပြီး အုခနဲ အော်တယ်။ ရုန်းတော့ မရုန်းဘူး။ လီးကို အဆုံးထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ အေးမြတ်ရဲ့ စောက်မွေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်လီးအရင်း ထိကပ်နေတယ်။ “အချစ် ခဏသည်းခံ။ နောက်ကျရင် ကောင်းသွားမှာပါ” ဖတ်ဖူးတဲ့ အောစာအုပ်တွေ ကြည့်ဖူးတဲ့ Defloration ဇာတ်ကားတွေထဲကလို ပြောလိုက်တယ်။
အေးမြတ်ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။ အေးမြတ်ရဲ့ လည်ပင်းတွေ ဂုတ်သားလေးတွေကို လိုက်နမ်းတယ်။ နို့စို့တယ်။ ထောင်မတ်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သွားနဲ့ ကိုက်ပေးတယ်။ အောက်မှာလည်း လီးအဝင်အထွက်ကို ဖြေးဖြေးလေး လုပ်ပေးနေတယ်။ လီးမှာ သွေးစသွေးနလေးတွေ ကပ်နေတယ်။ အေးမြတ်ခံနိုင်လောက်ပြီဆိုမှ ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်ပေးနေတယ်။ အခန်းထဲမှာ လီးအဝင်အထွက် အသားချည်း ထိတဲ့အသံနဲ့ အေးမြတ်ရဲ့ ညည်းသံခပ်တိုးတိုး လွင့်ပျံနေတယ်။ တင်းကျပ်စေးပိုင်နေတဲ့ အပျိုစောက်ဖုတ်ကို လိုးနေရတော့ ကြာကြာမလိုးနိုင်ဘူး။ သုက်ထွက်ချင်လာတာနဲ့ လီးကို အပြင်ဆွဲထုတ်ပြီး အေးမြတ်ဗိုက်ပေါ် ပန်းလိုက်တယ်။ အပျိုပါကင်ဖောက်တာဆိုတော့ အရသာမသိမှာစိုးလို့ ကွန်ဒုံးလဲ မစွပ်ထားဘူးလေ။ သုက်တွေကုန်အောင် ထုတ်ပြီးတာနဲ့ အေးမြတ်ကို ဂျာပေးနေလိုက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး။ သူလဲ ထပ်ပြီးသွားတယ်။ အေးမြတ်ဘေးမှာ ဝင်လှဲပြီး ဖက်ထားလိုက်တယ်။
“ကောင်းလိုက်တာ အချစ်ရော ကောင်းရဲ့လား” “အင်းးးးးးကောင်းတယ်” အေးမြတ်က တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်တယ်။ “အော် ငါ့အဖြစ်က မိန်းမကနေ ယောက်ျားလျာဖြစ်ပြီး ပြန်ခြောက်ရတဲ့ ဘဝပါလား !!!” အေးမြတ်တယောက် ကျွန်တော်ပါကင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း မိန်းမဆန်လာပါတော့တယ်။ ရုပ်ချော ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းရှိလူတန်းစား အေးမြတ်ကို ကျွန်တော်လက်မလွှတ်နိုင်ပါဘူး။ သူ့အိမ်မှာသာမက တည်းခိုခန်းမှာပါ ခဏ ခဏလိုးဖြစ်တော့ အပေးအယူလည်းမျှလာပါတယ်။ နောက်ပေါက်တော့ မဖွင့်ဖြစ်သေးဘူး။ မင်္ဂလာဦးညအတွက် ချန်ထားမလို့လေ။ တခါတခါ အေးမြတ်က ယောက်ျားစိတ်ဝင်လာရင်တော့ လီးတုနဲ့ ဆော်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ သူလဲ မလုပ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ပြည့်စုံနဲ့ ဖင်မခံဖြစ်တော့ပါဘူး။ တီဌေးနဲ့လဲ မလိုးဖြစ်တော့ဘူး။ တကယ်ချစ် တကယ်မြတ်နိုးရတဲ့ အေးမြတ် ရှိနေပြီလေ။ ချစ်သူနဲ့ အတူတူ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ကာလတွေဟာ တကယ်ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန်နားလည်ပြီး သစ္စာရှိရှိ ချစ်ကြတယ်။ ဆေးကျောင်းသူ တယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြတ် ဆရာဝန် ဖြစ်ရင် စေ့စပ်ပြီး နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင် လက်ထပ်ဖို့ တိုင်ပင်ထားကြတယ်။ နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်း သဘောတူတယ်။ ဘယ်လောက်သာယာတဲ့ ဘဝကြီးပါလဲ။
နေမျိုးက ရည်းစားရသွားတော့ အိမ်သိပ်မကပ်ဘူး။ တီဌေးကို ကျွန်တော်တယောက်တည်း မူပိုင်လို ဖြစ်လာတယ်။ တီခိုင် အပြင်သွားရင် တီဌေးကို ဖြုတ်တယ်။ လေပြေလဲ သင်တန်းတွေတက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ တီဌေးလဲ အရှက်ကုန်နေပြီ။ သူက အပေါ်မှာနေပြီး ဖင်ထဲ လီးသွင်းတတ်နေပြီ။ တီဌေးကို အထူးကုဆေးခန်းတခုမှာ ကလေးမရအောင် လက်မောင်းထဲ ထည့်တဲ့ ကိရိယာလေး ထည့်ထားပေးလိုက်တယ်။ ၅ နှစ်လောက် စိတ်ချလက်ချကဲလို့ ရအောင်လို့ပါ။ တီခိုင်ကတော့ အပြင်မှာပဲ အဖြုတ်ခံပါတယ်။ ဘော်ဒီတောင့်တောင့် ညီအစ်မ နှစ်ယောက်ကို ဖြုတ်နေရပေမဲ့ ကြာတော့ ရိုးလာတယ်။ လေပြေကလည်း တနေ့တခြား အတောင်အလက်စုံပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။ ယောက်ျားသဘာဝအရ လေပြေကို ဖြုတ်ဖို့ စဉ်းစားတယ်။ လေပြေက ကျွန်တော့်ကို မြင်ရင် ရှက်သလို ကြောက်သလိုနဲ့။ ဖြုတ်ပြီးရင်တော့ ရှက်ချင်မှ ရှက်မှာ။ တီဌေးတုန်းက သုံးတဲ့ လိင်ကိစ တော့ ကျန်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မုဒိန်းမှု ဖြစ်မှာကြောက်ရတယ်။ တီခိုင်လိုလဲ မကြမ်းရဲ။ သူ့ဟာသူ စိတ်ပါလာအောင် မြှူဆွယ်ပြီးလိုးရမယ်။ တီဌေးကို လိုးနေတဲ့အချိန် လေပြေရောက်လာရင် ချောင်းကြည့်မယ်။ ချောင်းကြည့်ဖန်များလာရင် သူလည်း စိတ်ပါလာမှာပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးပေါ့လေ။
တကယ်တမ်းကျတော့ စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က မလွယ်လှ။ တီဌေးက လေပြေသင်တန်းက ပြန်လာချိန်နီးရင် အဖြုတ်မခံဘူး။ အခန်းတံခါးကိုလဲ သတိထားပြီး လော့ပုံမှန်ချတယ်။ တီခိုင်ကျတော့လည်း အပြင်မှာ ဖြုတ်ရတာဆိုတော့ ဘာမှကြံစည်လို့မရဘူး။ နေမျိုးကို စည်းရုံးပြီး လေပြေကို ဖြုတ်ဖို့ ပြောလည်းမရ။ သူ့မှာ အေးမြတ်ရှိနေပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။ အေးမြတ်က ဘောပြားဘဝက သိပ်မသိသာပေမဲ့ မိန်းမလိုဝတ်တော့ ရုပ်ထွက်တယ်။ နေမျိုး ဘယ်လောက်တောင် ဖြုတ်ထားလဲမသိဘူး။ တင်ပါးက ရမ်းခါနေတာ။ အေးမြတ်အိုးကို မြင်တိုင်း အပျိုစစ် မစစ်ခွဲတဲ့ စာချိုးလေးကို သွားသတိရတယ်။ “အပျိုစစ်တုံ တင်ပါးဆုံ နိမ့်တုံ မြင့်တုံ ခုန်လိမ့်မည်” “အပျိုမစစ် ထိုကာတစ် တင်ဆစ်ရမ်း၍ ခါလိမ့်မည်” အေးမြတ်ကိုလဲ ဖြုတ်ချင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးမို့ သစ္စာဖောက်ရာကျမယ်။ သူ၊ သူ့အမေနဲ့ သူအဒေါ်ကို စိတ်ကြိုက်လိုးနေခဲ့ပြီးပြီ။ သူ့ချစ်သူတော့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းတော့ တီခိုင်လဲ သူ့အမျိုးသား ပြန်လာလို့ နေမျိုးတောင် မခေါ်ဘဲ ခရီးထွက်သွားတယ်။ နေမျိုးကလဲ အိမ်မကပ်ဘူး။ အေးမြတ်နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတယ် ထင်ပါရဲ့။ တနေ့တော့ မနက်စောစော တီဌေးကို စောက်ဖုတ် တချီ ဖင် တချီလိုးပြီး အိမ်ကို ပြန်လာတယ်။ ဖွင့်ရက်မို့ အဖေရော အမေပါ ရုံးသွားနေကြပုံရတယ်။ အိမ်သော့ဖွင့်ပြီး ဝင်လာတော့ အမေ့ ဖိနပ်နဲ့ တခြားဖိနပ် တရံ တွေ့တယ်။ ဘယ်လိုပါလိမ့်လို့ စိတ်ဝင်စားပြီး အမေတို့ အိပ်ခန်းနားသွားချောင်းတယ်။ အခန်း မရောက်ခင်က အမေရဲ့ ညည်းသံ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ မာန်သွင်းသံ အသားချင်း ရိုက်သံတွေက ဆူညံနေတယ်။ အခန်းတံခါးက မဟတဟလေး။ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ အမေက လေးဘက်ထောက်လျက်သား။ နောက်က လူက အမေ့ ခါးကို ကိုင်ပြီး လီးကို ဆောင့်ဆောင့်သွင်းနေတယ်။ သူ့လီးက အမေ့ခရေထဲ ဝင်ချည် ထွက်ချည်။ သူ့မျက်နှာကို မြင်တော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းတခုလုံး ချာချာလည် သွားတယ်။ အမေ့ကို ဖင်လိုးနေတဲ့သူကတော့ … * ပြီးပါပြီ *
Tags:ကြှနျတျော တကယျခဈြခဲ့မိသော အခါ
Bus ပျေါက ကွိုကျကုနျးမ